शीर्षक यो लेख “यो 25 Photoshop सबै भन्दा राम्रो विकल्प” शमूएल गिब्स द्वारा लेखिएको थियो, लागि बिहीबार 19 फरवरी मा theguardian.com 2015 12.02 UTC
एडोब गरेको Photoshop अब 25 वर्ष पुरानो र यकीनन फोटो सम्पादन को शिखर छ. तर, £ 8.57 / महिना मा, धेरै यो पनि हो र अधिक महंगा अधिकांश मानिसहरू खर्च गर्न सक्छन् भन्दा, त्यसैले यहाँ 25 लागि विकल्पहरू 25 photoshoppery को वर्ष.
पाँच सर्वश्रेष्ठ ...
Pixelmator – म्याकको लागि सबै भन्दा राम्रो
£ 22.99 – ओएस एक्स
Pixelmator ओएस एक्स को लागि सबै भन्दा राम्रो को छ. तस्वीर: Pixelmator
Pixelmator यकीनन मा एक म्याक सबै भन्दा राम्रो फोटो सम्पादक छ. यो सजिलो संग पनि सबै भन्दा ठूलो फोटो ह्याण्डलहरूलाई, रूप आवश्यक छ धेरै Photoshop उपकरण replicates, साथै Photoshop फाइल समर्थन रूपमा, र एक उत्कृष्ट यसलाई वरिपरि के व्याख्या र विस्तार भर्न सक्नुहुन्छ कि उपकरण निको भएको छ.
छिटो विस्तृत हेरफेर फोटोहरू हृदयस्पर्शी novices र विशेषज्ञहरूले समान अप लागि उत्कृष्ट. त्यहाँ पनि एक धेरै नै सक्षम £ 7.99 आईप्याड Pixelmator कि म्याक अनुप्रयोग ठूलो बनाउन नै उपकरण र प्रयोग मा सजिलो धेरै संग अनुप्रयोगको.
Paint.net - Windows को लागि सबै भन्दा राम्रो
फ्री – विन्डोज
माइक्रोसफ्ट रंग स्टेरयड मा. तस्वीर: Paint.net
Paint.net माइक्रोसफ्ट रंग लागि एक सरल प्रतिस्थापन रूपमा जीवन सुरु, तर यस्तो धेरै पत्रहरु र बढी उन्नत फोटो सम्पादन उपकरण रूपमा नयाँ सुविधाहरू विकसित. आज यो Windows को लागि सबैभन्दा छिटो मुक्त फोटो सम्पादकको छ, पेशेवर हेरफेर उपकरण केही बस छोटो रोक्छ कि एक सक्षम सुविधा सेट संग.
द्रुत सम्पादन लागि उत्कृष्ट, बाली र दैनिक फोटो सम्पादन बहुमत. सबै भन्दा राम्रो, यो निःशुल्क छ.
एडोब Lightroom – थोक-प्रबन्ध फोटो लागि सबै भन्दा राम्रो
£ 99 – विन्डोज, ओएस एक्स
एडोब Lightroom5स्ट्यान्ड उत्पादन रूपमा वा कम्पनीको रचनात्मक क्लाउड सदस्यता सेवा भागको रूपमा उपलब्ध छ. तस्वीर: एडोब
यकीनन सबै भन्दा राम्रो फोटो प्रबन्धक, एडोब Lightroom पर्याप्त उपकरण छ, पनि पेशेवरहरुको लागि, छुट्टै छवि सम्पादक माथि खोल्न भइरहेको जोगिन, Photoshop गरेको निको र हेरफेर उपकरण केही सहित. यो पनि प्रकाश आधारित ब्याच प्रोसेसिंग को एक ठोस संग्रह र स्वचालित सुधार उपकरण छ, लेन्स र क्यामेरा मोडेल, जो यो सबै भन्दा जब लागि छिटो बनाउँछ.
Aviary फोटो सम्पादक – मोबाइल लागि सबै भन्दा राम्रो
फ्री – एन्ड्रोइड, आइओएस
को आईप्याडका लागि Aviary, iPhone र एन्ड्रोइड तस्वीर: Aviary
Aviary धेरै नै सक्षम छवि स्पर्श-अप र रिसाइज उपकरण संग एक ठोस छवि सम्पादक छ, अब एडोब स्वामित्वमा रहेको. यो सरल इन्टरफेस सजिलो प्रयोग बनाउँछ छ र इन्स्टाग्राम-शैली फिल्टर संग आसक्त भन्दा मोबाइल सम्पादक भन्दा प्रदान गर्न थप छ.
Autodesk Pixlr – ब्राउजरमा सर्वश्रेष्ठ
फ्री – विन्डोज, ओएस एक्स, एन्ड्रोइड, iOS र वेब
म्याकको लागि Pixlr. तस्वीर: Autodesk
Pixlr छ सबै को एक मुक्त ज्याक लगभग कुनै पनि परियोजनाका लागि ठोस उपकरण सेट संग फोटो सम्पादक व्यापार. वेब अनुप्रयोग सबैभन्दा पूर्णतया विशेष मध्ये एक छ, जबकि यसको मोबाइल र डेस्कटप अनुप्रयोगहरू ठोस पनि छन्. Pixlr सबैभन्दा उन्नत सुविधाहरू एक आवश्यक $15 एक वर्ष सदस्यता, तर यो Autodesk को समर्थन छ, सबै भन्दा राम्रो कम्प्युटर-सहायता प्राप्त डिजाइन उपकरण केही बनाउने.
बाँकी सबै भन्दा राम्रो ...
£ 48 – विन्डोज
PaintShop प्रो – Photoshop गरेको दीर्घकालीन प्रतिद्वन्द्वी. तस्वीर: corel
Photoshop गरेको लामो-खडा प्रतिद्वन्द्वी. PaintShop प्रो को आफ्नो Juggernaut भन्दा सस्ता छ एक प्रतिद्वन्द्वी तर यस्तै निर्दिष्ट. यो Photoshop सबैभन्दा उन्नत सुविधाहरू अभाव, र यसको नयाँ अक्सर-मुक्त प्रतियोगिहरु केही बेहतर छ, तर अझै पनि एक सक्षम सम्पादक छ.
सेरिफ PHOTOPLUS X7
£ 79,99 – विन्डोज
सेरिफ PHOTOPLUS तस्वीर: सेरिफ
PHOTOPLUS एक ठोस सर्वांगीण छवि ओएस एक्स को लागि Affinity फोटो सिर्जना गर्ने कम्पनी बाट Windows को लागि सम्पादक छ. यो उपकरण को एक सभ्य सेट छ, लेन्स सुधार उपकरण र फोटोग्राफर अन्य मनपर्ने सहित. मात्र नकारात्मक उन्नत उपकरण को धेरै केही अन्य कार्यक्रम भन्दा बढी मार्गदर्शन हेरफेर आवश्यक र त्यसैले यो रूपमा शुरुवात अनुकूल छ भन्ने छ.
£ 79,10 – विन्डोज, ओएस एक्स
Photoshop तत्व उपकरण को अधिकांश मानिसहरू एक कम लागत लागि पूर्ण Photoshop बाट प्रयोग समावेश एडोब गरेको कट-तल छवि सम्पादक छ. तस्वीर: एडोब
अरू सबैका लागि फोटो सम्पादक गर्न जोगिन Photoshop गरेको कट-तल भान्जा तत्व एक उपकरण देखि वर्ष को अन्तिम जोडी भन्दा नाटकीय सुधार भएको छ. यसको ठूलो भाइ जस्तै उपकरण धेरै छ, उन्नत सामग्री जागरूक भरण र केही अन्य व्यावसायिक उपकरण लागि सुरक्षित. सबैभन्दा कार्यहरू लागि ठोस, हुनत यस्तै सुविधाहरू निःशुल्क वा सस्ता उपकरण उपलब्ध छन्.
कटुस4म्याकको लागि एक Pixelmator प्रतिद्वन्द्वी छ. तस्वीर: उडान मासु
ओएस एक्स को लागि अर्को उत्कृष्ट छवि सम्पादक, कटुस को "मानिसहरूले छवि सम्पादक" रूपमा बिल छ. यो उन्नत उपकरण र फिल्टर भरिएको गर्नुपर्छ तर फिर्ता खोसिएर नाङ्गै छ, Photoshop प्रयोगकर्ताहरूलाई परिचित र सजिलो हुने गरी बनाइएको छ कि सरल प्रयोगकर्ता इन्टरफेस सूचनाहरू लागि टिप्न.
फ्री – ओएस एक्स (बिटा मा)
Affinity फोटो तस्वीर: सेरिफ
Photoshop हुन Affinity फोटो प्रयास बजेट मा, तर तल dumbed छैन. यो छिटो छ, उन्नत उपकरण भरिएको र पेशेवरों उद्देश्य छ. कि उपकरण सेट को भाग हो अन्त-को अन्त सीएमवाइके प्रति च्यानल सम्पादन 16-बिट, RAW प्रक्रिया र एक Photoshop सामग्री जागरूक भरण-जस्तो दर भनिन्छ उपकरण.
फ्री – विन्डोज, OS X र लिनक्स
गिम्प GenericName सबै प्रमुख डेस्कटप अपरेटिङ सिस्टम लागि एक पूर्ण विशेष छवि सम्पादक उपलब्ध छ. तस्वीर: विकिपीडिया
GNU छविपरिचालनकार्यक्रम - - यो दुर्भाग्यपूर्ण नाम भए तापनि गिम्प GenericName सबैभन्दा सक्षम मुक्त खुला-स्रोत फोटो सम्पादकको एक Windows को लागि उपलब्ध छ, OS X र लिनक्स. यसले केही धेरै शक्तिशाली उपकरण छ, तर प्रयोगकर्ता रूपमा केही अरूलाई रूपमा अनुकूल छ.
£ 59,99 – ओएस एक्स
Apple को व्यावसायिक फोटो व्यवस्थापन र हेरफेर सफ्टवेयर, तर प्वाल निकट भविष्यमा द्वारा एप्पल तस्वीरहरु प्रतिस्थापन गरिनेछ. तस्वीर: एप्पल
स्याउ गरेको लामो-खडा फोटो आयोजक र सम्पादक, अन्तर tweaking फोटो को समूह को सबै भन्दा कुशल तरिका को छ, र साना समायोजन बनाउने र समीक्षा. यो आवर्धक पाश उपकरण विशेष प्रभावकारी हुन्छ. यो आफ्नो प्रतियोगिहरु को धेरै भन्दा प्रयोग गर्न छरितो छ र iPhoto संयोजनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ.
फ्री – ओएस एक्स
फोटो प्वाल र iPhoto गर्न उत्तराधिकारी छ, कारण वसन्त मा जारी लागि. तस्वीर: एप्पल
फोटो iPhoto र प्वाल दुवै लागि एप्पल गरेको प्रतिस्थापन छ, जो वसन्त मा उपलब्ध हुनेछ. पूर्वावलोकन अनुप्रयोगको उपलब्ध गरिएको थियो, जो छिटो छ, पर्याप्त उपकरण संग फोटो व्यवस्थापन र सजिलो ट्वीक्स बनाउन.
फ्री – विन्डोज, ओएस एक्स
गुगलको पिकासा संग सम्पादन कार्य मा निर्मित एक फोटो व्यवस्थापन उपकरण हो. तस्वीर: विकिपीडिया
पिकासा गुगलको फोटो प्रबन्धक र सम्पादक छ. यसलाई Google+ मा प्लग, तर एक ठोस सरल आयोजक छ र अनुप्रयोग मार्फत वा वेब मा पहुँच गर्न सकिन्छ. यो पर्याप्त उपकरण छिटो धुन फोटोहरू छ, मा हालियो केही फैंसी फिल्टर संग.
ACDSee प्रो 8
$99.99 – विन्डोज
ACDSee प्रो 8 तस्वीर: ACDSee
ACDSee एक Adobe Lightroom यसको हृदय मा फोटो व्यवस्थापन संग एनालग छ. यो छिटो र प्रभावकारी छ, तर लेन्स प्रोफाइल मा आधारित सीमित मेटाडाटा क्रमबद्धमा र कुनै स्वचालित सुधार. यो अनौठो फोटो सुधार गर्न पर्याप्त सम्पादन उपकरण छ, तर यो केही विनाशकारी र गैर-विनाशकारी सम्पादन को एक भद्दा मिश्रण हुन सक्छ.
सस्ती ACDSee 18 अधिक उन्नत सुविधाहरू अभाव तर फोटो व्यवस्थापनका लागि एक राम्रो विकल्प हुन सक्छ.
सरल छवि दर्शक पछाडि, पूर्वावलोकन केही उपयोगी छवि सम्पादन उपकरण प्रदान गर्दछ.
ओएस एक्स को लागि Apple को निर्मित छवि र कागजात दर्शक अँध्यारो घोडा को एक बिट छ. यसको सरल हेर्ने बाहिरी काट्ने को पूर्ण सक्षम छ कि एक तेज र प्रभावकारी छवि सम्पादक लुकाउँछ तल, रिसाइज, ढाँचा र सरल touchups. यो एक पटक मा तस्बिरहरू एक गुच्छा सम्पादन मा विशेष राम्रो छ.
माईक्रोसफ्टका लामो-स्थितिमा छवि सम्पादक अझै पनि उपलब्ध छ. तस्वीर: माइक्रोसफ्ट
माईक्रोसफ्टका मूल छवि सम्पादक. यो हालैका वर्षहरूमा एक बिट परिवर्तन र अझै पनि एक ठोस छ गर्नुपर्छ, आधारभूत छवि सम्पादक. यो धेरै कम से कम नोस्टाल्जिया खातिर जाने लायक छ, सरल काट्ने र रिसाइज जब साँच्चै रूपमा Photoshop शक्तिशाली कुरा आवश्यक छैन भनेर लागि वा.
फ्री – वेब
सुमो रंग ब्राउजरमा सीधा काम गर्दछ. तस्वीर: सुमो रंग
ब्राउजरमा Photoshop FACSIMILE, निःशुल्क सुमो रंग एक उत्कृष्ट द्रुत फोटो सम्पादक छ. उन्नत उपकरण को धेरै मात्र उपलब्ध छन् $19 समर्थक संस्करण, तस्बिरहरू को सरल हृदयस्पर्शी अप लागि तर, रिसाइज र समान निःशुल्क सम्पादक काम गर्छ.
कुनै पनि अतिरिक्त सफ्टवेयर बिना छिटो र साना सम्पादन लागि प्रभावकारी. तस्वीर: Screengrab
PicMonkey मुक्त छ, सरल फोटो touchups लागि एक ठोस सुविधा सेट संग ब्राउजर आधारित छवि सम्पादक, छवि र थप्दा फ्रेम पाठ थप्दा. तस्बिरहरू एक कम्प्युटर वा विभिन्न क्लाउड सेवा लिइएका गर्न सकिन्छ, Dropbox र फ्लिकर सहित. एक भुक्तानी-को लागि उन्नयन विज्ञापन हटाउँदछ र थप फन्टहरू र प्रभाव पहुँच दिन्छ.
"संसारको सबैभन्दा उन्नत अनलाइन छवि सम्पादक" रूपमा बिल यसलाई सम्पादन को सबै भन्दा प्रकार को लागि धेरै सुविधाहरू छ. छवि हेरफेर उपकरण सिर्फ एक सरल क्लिक टाढा र तान्नुहोस्-एक-स्लाइडर छन्, तर सबैभन्दा उपकरण शुरुआती सङ्घर्ष सक्छ त निर्देशन को बाटो मा सानो छ. थप शक्तिशाली भरण सुविधाहरू लागि देख ती अन्यत्र हेर्न आवश्यक हुनेछ.
ribbed, यो भ्यागुतो जस्तै.
ribbed, तापनि यसलाई अनौठो नाम र भ्यागुतो लोगो छ, छिटो र सजिलो प्रयोग गर्न अनलाइन छवि सम्पादक तपाईं लागि सम्पादन को सबै भन्दा गर्छ भन्ने छ, यो शुरुआती वा सरल जब लागि उत्कृष्ट बनाउने. केही विकसित उपकरण उपलब्ध छन्, तर राम्रो विकल्प बाहिर छन्.
फ्री – विन्डोज, ओएस एक्स, iPhone, एन्ड्रोइड र वेब
Fotor गरेको एक म्याक पायो, विन्डोज, iPhone र Android अनुप्रयोग. तस्वीर: Fotor
Fotor देखि अनुप्रयोग वा वेब अनुप्रयोग मा या त बारेमा कुनै पनि मंच मा उपलब्ध छ कि एक मुक्त छवि सम्पादक छ. यो उपकरण को राम्रो चयन छ, प्रभाव को एक-गर्न-सजिलो प्रयोग स्लाइड मात्रा हरेक. ब्याच सम्पादन बोनस छ, रूपमा फिल्टर उपकरण हो.
फ्री – एन्ड्रोइड, iOS र वेब
BeFunky एक slick छ, ब्राउजर आधारित फोटो सम्पादक.
एक छिटो र सजिलो प्रयोग गर्न छवि सम्पादक कि iPhone र Android मा apes इन्स्टाग्राम, तर केही थप उपकरण संग. वेब अनुप्रयोग यस्तै सरल छ, र छिटो साझेदारी अघि फोटो अनुकूलन लागि ठोस.
Google+ को लागि दरकिनार हुन सक्छ Snapseed गरिएको, तर छवि सम्पादक वरिपरि राम्रो व्यक्तिहरूलाई एक अझै पनि छ. तस्वीर: गुगल
Snapseed यसलाई Google+ मा एकीकृत गर्न प्राप्त भएको थियो पछि दरकिनार गरिसकेका गुगलको मोबाइल छवि सम्पादक छ. तर अनुप्रयोग अझै पनि काम गर्दछ र यसको उपकरण, फिल्टर र सजिलो प्रयोग गर्न स्पर्श नियन्त्रण अझै पनि केही वरिपरि सबै भन्दा राम्रो को हो.
£ 3.99 £ 7.99 गर्न – एन्ड्रोइड, आइओएस
Photoshop को एडोब मोबाइल संस्करण एक सक्षम टचस्क्रीन छवि सम्पादक छ. तस्वीर: एडोब
Photoshop टच एडोब गरेको टचस्क्रीन केन्द्रित मोबाइल संस्करण हो, तर यो लगभग शक्तिशाली छ वा यसको namesake रूपमा धनी सुविधा. यो फोटो फिल्टर को एक चयन र केही सभ्य touchup उपकरण छ, तर यो भन्दा ठूलो बिक्री बिन्दु छ संग एडोब रचनात्मक क्लाउड एकीकरण छ, जो डेस्कटप Photoshop प्रयोगकर्ताका लागि उपयोगी छ.
एडोब गरेको लाइटर Photoshop एक्सप्रेस पनि धेरै आधारभूत उपकरण निःशुल्क उपलब्ध छ.
← सोनी SmartWatch3द्रुत समीक्षा [भिडियो] अर्को पोस्ट →